ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသူများ၏မီဒီယာအပြုအမူအပေါ်သန့်ရှင်းသောခရိုင်ရှိသန့်ရှင်းသောခရိုင်ရှိကလေးသူငယ်များအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (၂၀၁၈) - သင့် ဦး နှောက်သည်ဆန့်ကျင်သည်။
Pujiati, Eny, Dwi Septi Handayani နှင့်မဟာပညာတော် Akademi Keper လမ်းကြောင်း Krida Husada ။
Jurnal Profesi Keperawatan Vol5မရှိ။ 1 (2018)
ဆယ်ကျော်သက်များသည်ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ သူသည်တိုင်းပြည်၏ရုန်းကန်မှုကိုဆက်ခံသူဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၊ အထူးသဖြင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ၏လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အညီဆယ်ကျော်သက်များ၏အရည်အသွေးကိုပြောင်းလဲစေသည့်မမျှော်လင့်သောအရာများစွာရှိသည်။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သည်အလွန်တက်ကြွသောအသက်အရွယ်ဖြစ်သောကြောင့်အားပေးခြင်းနှင့်လိင်အပြုအမူများတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ခြင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်တာ ၀ န်ကျ။ ကျန်းမာသောလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ မထိန်းချုပ်နိုင်သောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်အပြုအမူ၏သက်ရောက်မှုသည်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ကြီးမားသောပြproblemနာဖြစ်သည်။ Green (၂၀၀၃) အရ၊ လူတစ် ဦး ၏အပြုအမူသည်အချက် (၃) ချက်ပါ ၀ င်သည်။ ဤလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမီဒီယာများနှင့်သက်တူရွယ်တူများအနေဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူ Kudus ခရိုင်နှင့်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤသုတေသနအမျိုးအစားသည်ရှင်းလင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းအားဖြင့်ကဏ္crossအလိုက်ချဉ်းကပ်နည်းကို သုံး၍ သုတေသန (အချိန်ကာလချဉ်းကပ်မှု) ။ ဤလေ့လာမှုတွင်လူ ဦး ရေမှာ ၂၈၅၀ ရှိပြီးစုစုပေါင်းနည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ Kudus ခရိုင်ရှိအထက်တန်းကျောင်းသားဖြစ်ပြီးရိုးရှင်းသောကျပန်းနမူနာများဖြင့်နမူနာ ၃၂၁ ခုနှင့်မေးခွန်းပုံစံများကို အသုံးပြု၍ သုတေသနပြုသည့်ကိရိယာများမှနမူနာများကိုရရှိသည်။ ရလဒ်များအရကျောင်းသားများအားလုံးသည်အင်တာနက်ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်းဖြေဆိုသူ ၂၆၄ ဦး (၈၂.၂%) သည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မကြာခဏထိတွေ့ခဲ့ကြပြီး (၅၇) ဦး (၁၇.၈%) သည်ညစ်ညမ်းစာပေမီဒီယာများ၊ ခိုင်မာသည့်ဖြေဆိုသူ ၂၃၄ ဦး (၇၂.၉%) နှင့်အားနည်းသောဖြေဆိုသူ ၈၇ ဦး (၂၇.၁%)၊ အားကောင်းသောအမျိုးအစား ၂၄၉ ဖြေဆိုသူ (၇၇.၆%) နှင့်အားနည်းသော ၇၂ ဖြေဆိုသူ (၂၂.၄%) တွင်ရှိသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းရလဒ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမီဒီယာများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (p = 2003)၊ ရွယ်တူချင်းများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (လိုက်လျောညီထွေမှု) (စ = 2850) နှင့်ရွယ်တူများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှု) နှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (p = p = 321) ။ ဤသုတေသနပြုချက်အရကျောင်းသည်ကျောင်းသားများအားမျိုးပွားကျန်းမာရေးနှင့်ဘဝကျွမ်းကျင်မှုပညာရပ်များကိုဇာတ်ကောင်များတည်ဆောက်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ကျောင်းသားများ၏မိုဘိုင်းဖုန်းများအပေါ်မကြာခဏစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သဘောထားပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာကိစ္စများကိုဆွေးနွေးရန်မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းစသည်တို့ကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ကျောင်းသားများ၏အထူးသဖြင့်ကျောင်းသားများရင်ဆိုင်နေရသောလိင်အပြုအမူပြောင်းလဲမှုများ။
keywords: ညစ်ညမ်းမီဒီယာထိတွေ့မှု, သက်တူရွယ်တူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်အပြုအမူ
Remaja merupakan generasi muda yang Akan menjadi penerus perjuangan bangsa Namun terkadang banyak ဟက်တာ-Hal tak terduga yang membuat kualitas remaja menjadi bergeser စိရ dengan pesatnya arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi ။ Mengingat usia remaja adalah usia yang sangat aktif termasuk aktif dalam dan perilaku seksualnya membuat remaja semakin sulit mengambil keputusan mengenai perilaku seksual yang jawab dan sehat bertanggung dorongan ။ Dampak yang ditimbulkan Dari perilaku seksual remaja yang tidak terkontrol merupakan sebuah persoalan serius bagi remaja ။ Menurut အစိမ်းရောင် (2003), perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong ။
လိင်မှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သောအခွင့်အလမ်းများသည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောမီဒီယာများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို Kabupaten Kudus.Jenis penelitian inimerupakan ရှင်းလင်း: သုတေသန dengan menggunakan pendekatan လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်း ဤအချက်အလက်သည်သင်၏အချက်အလက်များကိုစုစည်းဖော်ပြပေးသည် (အမှတ်အချိန်ချဉ်းကပ်မှု) ။ ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ကျောင်းသားများအားအလယ်အလတ်တန်းစားကျောင်းသားများသည်သင်ကြားရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာနည်းပညာများကိုသင်ကြားပို့ချပေးသည်။ စပျစ်သီးပြွတ် sampel dengan pengambilan yang berjumlah 2850orang dan simplerandom နမူနာ dengan didapatkan ပမာဏရှိ 321 respondendan instrument penelitiannya dengan menggunakan angket ။ ရလဒ်အနေဖြင့်လူပေါင်း ၂၆၄ ဦး ၏တုံ့ပြန်မှု (၈၂.၂%) သည်မီဒီယာအပြာရုပ်ပုံများကိုပုံနှိပ်ဖော်ပြပေးသည် (၁၇.၈%)၊ မီဒီယာအပြာရုပ်ပုံများ၊ မျက်နှာပြင်ညီမျှမှု ၂၃ ကဏ္tekananများ။ ဖြေဆိုသူ (၇၂.၉%) ကဖြေကြားပေးချက်များ (ဖြေဆိုသူ ၂၇.၁%) (၂၇၉%) အားဖြေကြားသူ (၂၇.၉%) သည် ၂၇၉ ဦး အားဖြေဆိုခဲ့သည်။ ကဏ္asilanပေါင်းစုံမှ ၀ င်ငွေရှာဖွေခြင်းသည်ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာမီဒီယာအပြာရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း (p = 264)၊ အန္တာရာက္သိက္ခန္ဓေုသန္ဓေတည်ခြင်း (ပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲခြင်း) terksadapaja seksualremaja (p = 82,2), ဤကဲ့သို့သော (57) terhadapperilakuseksualual ။ သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်သင်ကြားပေးသောသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း ဘဝကျွမ်းကျင်မှု sebagai ဇာတ်ကောင်အဆောက်အကျောင်းသားများအနေဖြင့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။
Sumiati, Dinarti, Nurhaeni, H. & Aryani, R (2009) ။ Kesehatan Jiwa Remaja dan Konseling၊ ဂျကာတာ၊ Trans Info Media ။
Kompas, http://international.kompas.com မှစ. ရရှိနိုင်သော (2012) situ Porno Makin Mengkhawatirkan ။ (Access 15 ဧပြီလ 2017)
Kristo, ဘဏ္ဍာရေးနှစ်, 2013 ။ Posisi အင်ဒိုနီးရှား di Percaturan Teknologi Dunia, http: // www ။ အင်ဒိုနီးရှား-di- percaturan-teknologi-dunia inet.detik.com/,5Mei 2017 diakses
Singh ကအက်စ် & Darroch, JE (1999) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်လမ်းကြောင်းသစ် (1999) ။ ဆယ်ကျော်သက်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်း: ၁၉၈၂-၁၉၉၅ ။ မိသားစုစီမံကိန်းအမြင်များ, 1982 (1995), 31-5
Escobar, SL, Chaves, Tortolero, SR, Markham, CM, အနိမျ့, BJ, Eitel, P နှင့် Thikstun, P.2005 ။
Saifuddin, AF et.al. Perilaku Seksual Remaja di Kota dan di Desa: Kasus Kalimantan Selatan ။ ဂျကာတာ Laboratorium Antropologi Jurusan Antropologi FISIP UI ကို။ 1997 ။
Jawa Pos ။ Remaja Harus Berani Beda ။ (Serial Online) .http: // www.aidsindonesia.or.id/index.Php?option=comcontent&task=view&id=1235 & itemid =2။ pada ဖတ် 10mei 2017
Jupri, အမ် Intensitas Mengakses situ Seks dan Permisivitas Perilaku Seksual Remaja ။ 2004Laporan Penelitian ။ http://www.Litbangda-Sulsel.go.id/ modules.Php? အမည် = pemenang_Lki.html.2007
ဘရောင်း WD, Keller အယ်လ်ကိုလိုနီလိင်အချိုးပုရွက်ဆိတ် Formica exsecta အတွက်မိဖုရားအရေအတွက်ကိုသော်လည်းမဆက်နွယ်မှု asymmetry နှင့်အတူခြားနားသည်။ proc ။ R. Soc ။ ခ 2000; 267: 1751-1757 ။ Doi: 10.1098 / rspb.2000.1206 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Soejoeti.SZ (2001) ။ Perilaku Seks di Kalangan Remaja dan Permasalahannya ။ မီဒီယာ Litbang Kesehatan Volume ကို XI No.1 Tahun 2001: 30-35
Kudus, pastinews.com.http: //www.antarajateng.Com/detail/index.Php က id = 37229 Diakses pada tanggal 21 Mei 2017 ။
Kapak, KPS ။ စစ်တမ်း Penyalahgunaan Narkoba dan Perilaku Menyimpang di Kalangan Remaja ။ Kabupaten Kudus ။ 2011 ။
အစိမ်း, L ကို။ (2000) .CommunicationandHumanBehaviour.PrenticeHall, နယူးဂျာစီ
Soetjiningsih ။ (2004) ။ Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahanya ။ ဂျကာတာ: PT ။ RhinekaCipta
Mukti, အေ et.al. Perlu Kita Ketahui Kesehatan Reproduksi Remaja Telaah Kritis Realitas ။ Psikologi Universitas Muria Kudus ။ 2005 ။
Rohmahwati DA et.al. Pengalaman Pergaulan Bebas dan VCD ကို Porno terhadap Perilaku Remaja di Masyarakat ။ 2008 http://kbi.gemari-or.id/berita detail.php? id = 2569, Diakses Tanggal 29 juni 2017 ။
Santrock ဂျွန် w ။ (2003) ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် perkembangan remaja ။ ဂျကာတာ: Erlangga
Hurlock, eb 2003.Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang RentangKehidupan ။ Edisi Kelima, ဂျကာတာ: Erlangga
Damanik, အိပ်ချ် 2012 ။ PengaruhPaparan မီဒီယာအငျတာနကျ dan တေမန်မြို့ Sebaya Terhadap Perilaku Seks Bebas Pada Remaja SMA XYZ Tahun 2012 ။ စာတမ်း Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara ။
Sarwono, SW (2012), Pengantar Psikologi Umum ။ ဂျကာတာ: PT ။ Raja Grafindo Persada